Ndeha Hihaona Amin’ilay Pretra Ortodoksa Ao Venezoela Miangaly Rock Anaty Rebarebany · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Glenn Bower
Voadika ny 01 Oktobra 2015 18:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, Ελληνικά, 日本語, Español
Pretra Ortodoksa, Fernando Rivas, manana ny tariny manokana, Irinika, izay ampiasainy mba handefasana hafatry ny fitokisana sy finoana ho an'ny olona, saingy tsy misy marika ara-pivavahana. “Avy mba handresy lahatra ny olona aho, fa tsy hijanona amin'ireo izay efa resy lahatra”, hoy ilay ranamana 47 taona avy any Caracas, nanome toky. Sary: Jorge Santos Jr (fampiasàna nahazoana alalana).
Lahatsoratra navoaka voalohany tamin'ny bilaogy Tesis y Antítesis
Voalohany, toa zavatra tena ara-dalàna tsara eto amin'izao tontolo izao ny hoe lehilahy iray nanatrika ny fankalazana ny Fetin'ny Ray, na ny famaranan-taona ao amin'ny sekolin-janany. Na izany aza anefa, farafahakeliny hampihiratra ny mason'ny olona vitsivitsy sy hahasarika ny resaky ny olona, ny trangan-javatra hoe pretra io ray aman-dreny io, ary koa tonga manolotra ny tenany miaraka amin'ny rebarebany eo anatrehan'ireo tomponandraikitra. Fiainan'i Fernando Rivas io toe-javatra hafahafa io nandritra ny taona maro, ilay Olona Manana diploma Ambony Mikasika ny Fandaharam-pianarana Iraisam-pirenena, teraka ny taona 1968 tao Caracas, renivohitr'i Venezoela.
Mety ho nanao fitenenan-dratsy fivavahana ny resaka finoana teny imasom-bahoaka ve izy,? Tsy izany mihintsy, fa na dia pretra aza i Rivas, an'ny Fiangonana Ortodoksa Grika izy, izay mamela ireo mpanompony hanambady sy hanana fianakaviana. Saingy tsy maintsy averimberina foana io fanazavana io, na ho an'ireo zanany manoloana ireo mpiara-mianatra sy ireo namana, na ho an'ilay pretra ihany rehefa voahodidin'ireo ray hafa eny amin'ny foara an-dàlambe.
Ireo rehetra ireo dia nanomboka tamin'ny 1996 raha nanapa-kevitra i Rivas sy ny vadiny fa handeha hamangy an'i Bolgaria, nanam-pikasana hianatra. Amin'ny maha-mpihira opera azy, naniry hanitatra ny fahalalany mikasika ny mozika ilay lehilahy tao an-trano, raha toa mbola nandeha nikarika izay hanatsaràny ny fahalalany mikasika ireo taokanto ho an'ny maso kosa ny vadiny, indrindra fa mikasika manokana ny sary fanaingoana Byzantine.
Tonga tany mba hianatra izahay, saingy nanomboka nandeha nivavaka izahay ary nisy pretra teo, izay Ortodoksa, nanomboka nanontany ahy hanampy amin'ny litorjia, ary afaka fotoana elaela nanontany ahy raha mazoto aho ny hotokanana. Izay no nahatonga izao rehetra izao.
Tao amin'ny efitranony tao La Florida, faritry ny saranga antonony ao Caracas, tao no nahatsiarovany ahoana no nahitàny ny antso marina ho azy, izay nilàny ny “eny” iray hafa avy tamin'ny vadiny. “Tsy maintsy manaiky ny vehivavy ary tsy maintsy manao sonia taratasy vita printy mihitsy aza,” hoy izy nanazava.
Ny taona 2006, notokanana ho pretran'ny Fiangonana Grika Orthodox i Fernando Rivas nony farany, ary araka ireo tanjona rehetra amin'ny fiainany maha-relijiozy azy, Papa Elias izy. “Sahala amin'ny Papa sy ireo lehilahin'Andriamanitra hafa eo amin'ny tantaran'ny maha-olombelona, manova anarana izahay, saingy amin'ny fiainana andavanandro dia i Fernando Rivas foana aho.”
Saika hanambatra avy hatrany ny firehetam-pony amin'ny fanolorantenany ho an'Andriamanitra i Elias, izay mbola matanjaka be tamin'ny fotoana nandraisany ny akanjony. Tsy nandao ny mozikany izy – fa nahodiny io ho fitaovana ara-panahy, sahala amin'ireo fampianaran'ny Baiboly rahateo ihany. “Telo taona lasa izay, namorona ny tariko aho, Irinika, izay midika ho fitanisàna ny fandriampahalemana amin'ny teny Grika. Milalao rock izahay, nefa miangaly ska sy reggae ihany koa, ary mpanao mozika matihanina ireo manaraka ahy.”
Rehefa mandre pretra iray miresaka momba ny “rock”, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny fananan'ny mpivavaka fanoherana nentim-paharazana mikasika io karazana mozika io, izay sahala amin'ny mifanohitra. “Tsy fahafatesana sy zava-mahadomelina fotsiny ny Rock,” hoy i Elias manazava. “Tsy marina izany. Fitsaratsaram-poana izany, ary tianay hoesorina ilay fitsaratsaram-poana. Fijoroana vavolombelona eo amin'ny fiainana koa ny Rock, izay ampiasainay handefasana hafatra mikasika ny toky sy fanantenana.” Milaza izy fa nitombo tao anatin'ny fihainoana ny feon'ireo The Doors, Janis Joplin, sy The Rolling Stones, ary mpankafy indrindra ny Pink Floyd.
Na tamin'ny folo taona lasa aza, ny mpanabe ao amin'ny sekolin-janany dia gaga noho ny fandehanany amin'ireo hetsika maro isan-karazany, fisangiana ny bikan'ankanjo Ortodoksa, tamin'izany andro izany tsy mahagaga loatra ho an'ny olona ny mahita azy anaty “kaonseritra”, miakatra sehatra ao anaty rebarebany.
Ho anay dia tsy maintsy anaovana ireo. Rehefa ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviako ihany aho vao manala an'ireo, na amin'ny fotoana izay tena handraisako andraikitra amina opera iray izay mila akanjo manokana. Miakanjo ny rebarebako mandrakariva aho, na dia mandritra ny fampisehoan'ny Irinika aza.
Raha misy zavatra iray tsy tian'ny Papa Elias, dia rehefa miteny ny olona hoe Miangaly “rock kristiana” izy. Tiany ny hiantsoana ny mozikany hoe “rock mampifandray”, satria ny mpihaino kendreny dia tsy tsy ireo mpino efa nanolo-tena manontolo fa ireo karazana olona rehetra mikatsaka valiny amin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra sarotra lalovana amin'ny maha-olona, nefa tsy ahitana santionana mari-pivavahana. “Te-handresy lahatra aho, tsy mijanona fotsiny amin'izay efa resy lahatra”, hoy izy.
Mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolo sady mpampianatra mihira i Elias, mpandray anjara isan-kerinandro amin'ny fandaharana amin'ny onjam-peo amin'ny ampahany atao hoe “Rock sy Finoana” izy, raim-pianakaviana manambady ary niteraka roa, ary – raha tsy ampy io – pretra iray. Rehefa anontaniana ny fomba ahitany foana ho an'io andraikitra farany io, mamaly tsy sazoka izy, “Mahafantatra ireo mpivavaka ao amiko fa afaka mandray azy ireo 24ora amin'ny 24 ora aho.” N'inona n'inona tsy maintsy ajanona noho ry zareo dia hajanona.”